IPolar M200, elinye iwashi elikhethekile ekusebenzeni | Izindaba zamagajethi
UPolar ubuyela enkokhisweni. Enye yezinkampani ezidume kakhulu ezikhethekile ekuqapheni ukuqina emhlabeni wonke. Le yindlela athula ngayo iPolar M200, iwashi le-GPS elenzelwe ikakhulukazi abathandi abasebenza. IPolar ibilokhu yaziwa ngokudala amadivayisi asebenzayo, okuncane okunikezwe ukuthi kusetshenziswe ngabantu abenza ezemidlalo njalo, bengenayo enye inhloso kunokuzigcina befanelekile. Lawa madivayisi athambekele ekubeni nedizayini egxile kakhulu ekumelaneni kunokuhamba, yize le Polar M200 inganakwa neze uma iqhathaniswa namanye amadivayisi enkampani. Sikutshela konke odinga ukukwazi ngePolar M200, iwashi elisha likaPolar eligxile ekusebenzeni.
Kumele sixwayise, iwashi Akazimisele ukukwazisa inkunzi, noma ukukhombisa ngayo. Izokwazi ukukunikeza izibalo zakho zezempilo, izodlidlizela ukukwazisa ngomyalezo obalulekile, futhi izokwazisa nangezingcingo, kepha akukho okunye. Ayinazo izinhlelo zokusebenza ezithile, ngaphandle kwalokhu esikufakayo kudivayisi yethu yeselula ukugcina zonke izibalo esinikezwa yiPolar M200. Cishe iyidivayisi yokulandelela ukuqina ngaphandle kokuningi, isikrini sincane futhi sinemibala emibili eyisisekelo.
Ngaphezu kwalokho, ihlanganise i-GPS, ukulandela izindawo namabanga esiwahambile. Ngemuva inenzwa esezingeni eliphezulu yokushaya kwenhliziyo. Ngale ndlela, iPolar M200 izositshela amakhalori ashile, izinyathelo, isikhathi kanye nekhwalithi yokulala kwethu nokushaya kwenhliziyo yethu. Ukuntula ezinye izinketho, sizithola singekho ngaphansi kwezinsuku eziyisithupha zokuzimela. Kodwa-ke, kubathandi bokudizayina, iPolar iyethula ngemibala emihlanu ehlukene, omnyama, obomvu, omhlophe, oluluhlaza nephuzi, kukho konke ukuthanda. Idivayisi izoqala ngo- € 150 kubathengisi abakhulu, njenge-Amazon ne-El Corte Inglés.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » IPolar M200, elinye iwashi elikhethekile ekusebenzeni
I-Samsung Galaxy S8 ngaphandle kwenkinobho ephathekayo?